गगन थापाको सनसनीपूर्ण खुलासा : कम्युनिस्ट देखेर अदालत, प्रहरी, सेना थरथर कापिरहेका छन् ! – " सुलभ खबर "
गगन थापाको सनसनीपूर्ण खुलासा : कम्युनिस्ट देखेर अदालत, प्रहरी, सेना थरथर कापिरहेका छन् !
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद गगनकुमार थापाले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कामकारवाही देखेर अदालत, प्रहरी, सेना लगायत निकाय थरथर कापिरहेको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस गैंडाकोट–९ ले आयोजना गरेको शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले कम्युनिस्ट सरकारले अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासन, सेना सबैमा बिस्तार–बिस्तारै त्रास निर्माण गरिरहेको बताए ।
‘उहाँहरू कम्युनिस्टको सरकार चलाउने मात्रै होइन, कम्युनिस्ट सत्ता निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान अनुसार संसदले सरकार बनाउँछ । संसदको आफ्नो अधिकार छ, सरकारको आफ्नो अधिकार छ, अदालतको आफ्नो अधिकार छ । तर संसदको दुईतिहाइ बहुमत देखाउँदै सबैलाई तर्साउने काम भइरहेको छ ।’
ओली सरकारले नेपाललाई कम्बोडियाको हालतमा पुर्‍याउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । थापाले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै रुचाउने र उनीबाट प्रभावित भएको समेत बताएका छन् ।
‘हुन सेनको देश कम्बोडियामा पनि चुनाव हुन्छ, उनले चुनाव जित्छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसजस्तै पार्टी छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेता विदेशमा भएका बेला भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर देश छिर्न दिएनन् । त्यो प्रतिपक्षी पार्टीले विशेष अधिवेशन गर्‍यो । नयाँ सभापति बनायो । नयाँ सभापतिलाई सरकारले राजद्रोह मुद्दा लगाएर थुनायो । त्यहाँको पत्रिकाले यो ठीक होइन भनेर लेख्यो । पत्रिकाका सम्पादकलाई कर छलि मुद्दा लगाएर थुन्यो ।’
कम्बोडियाको सरकारले प्रतिपक्षीलाई सिध्याउने गरी काम गरिरहे जस्तै व्यवहार ओली सरकारले समेत देखाएको नेता थापाले बताए । ‘केही महिनाअघि त्यहाँ चुनाव भयो । १२५ सिटमा १२५ सिट नै हुन सेनको पार्टीले जित्यो । अरुले त्यहाँ चुनावै जितेनन्,’ उनले भने, ‘कम्बोडियामा चुनाव हुँदैन ? हुन्छ। कम्बोडियामा अदालत छैन ? अदालत छ । कम्बोडियामा प्रेस छैन ? छ । तर त्यहाँ सबैले सरकारले चाहेको मात्रै गर्छन्। त्यस्तै अवस्था नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याउन खोज्दैछ ।’
नेपालमा सूचना प्रविधि ऐन लगायत विभिन्न कानून ल्याएर जनतामाथि निरंकुशता लाद्ने काम भइरहेको नेता थापाले बताए । उनले वर्तमान सरकारले बाटो बिगारेका कारण अब संसद र सडकबाट कडा आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘मुलुक बनाउने हो भने कसैले पनि रबैया देखाउनु हुँदैन । रबैया देखाउनेहरु नै परास्त हुने भएकाले कांग्रेस जिम्मेवार र शालीन ढंगले संगठन निर्माणमा अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री तथा संघीय सासंद डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर ल्याएको संविधान सबैले मिलेर संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दुवै शक्ति जिम्मेवार बनेर संविधानको पूर्णपालन गरेर अघि बढेमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनेमा कोइरालाले जोड दिए।
तेह्रै महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपनि पार्टीले खासै उपलब्धी हासिल गर्न नसकेकाले अब चौंधौं महाधिबेशनबाट पार्टीमा आमुल परिवर्तन हुने डा. कोइरालाले बताए । उनले पार्टीमा अब शेरबहादुर देउवाले विश्राम लिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेस एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने र पार्टी नेतृत्व अबको महाधिवेशनबाट परिवर्तन हुने पनि डा. कोइरालाले स्पष्ट पारे ।
सभापति उमा पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, प्रदेश सांसद तथा जिल्ला सभापति बिष्णु लामिछाने, चितवन पार्टी सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, संघीय सांसद सत्यनारायण खनाल, संविधानसभा पूर्व सदस्य महेन्द्रध्वज जीसी लगायतले कांग्रेसमा गुट र उपगुटको अन्त्य पहिलो आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै पार्टी कार्यकर्ता समेत सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।